Zvemotokari Seal Fekitori - China Zvemotokari Seal Vagadziri, Vatengesi
Mitsubishi Fuso Automotive Crankshaft Kumashure Oiri Seal China Mugadziri
Mitsubishi Fuso Automotive Crankshaft Rear Oiri Seal
OE nhamba: ME017207
Kuongorora: 100-124 / 158-14.5mm
Chinyorwa: Silicon nesimbi
Audi Volkswagen Zvemotokari Crankshaft Kumashure Wheel Oiri Seal Mugadziri
-Automobile mafuta chisimbiso chinonyanya kushandiswa mumotokari injini crankshaft mafuta chisimbiso, camshaft mafuta chisimbiso, vharafu mafuta chisimbiso, kufambisa shaft mafuta chisimbiso, kutyaira ekisero mafuta chisimbiso, chikuru yokuderedza mafuta chisimbiso, akatakura mafuta chisimbiso
Ford New Holland Tarakita Half Shaft Seal Sefa Yekuchengetedza Aseembly China Manufacturer
Ford New Holland Tarakita Hafu Shaft Seal
Ford New Holland Tractor Valve Stem Chisimbiso China Manufacturer
FORD ITSVA HOLLAND TRACTOR VALVE STEM SEAL 84349929
Hyundai YeMotokari Valve Stem Zvisimbiso Mugadziri
Mavharuvhu emagetsi emagetsi ndeanopa zviyero zvinotsanangurwa zvemafuta kune vharuvhu yemagetsi yemagetsi epinjini yemagetsi yekuzora giya yevhavha uye kudzikisa mamishini einjini. Valve stem zvisimbiso zviripo kune dhiziri uye peturu engines uye uye pasina kuwedzera.Hyundai Automotive Valve Stem Zvisimbiso
Shaft Hub Oiri Seal Trailer Oiri Seal China Mutengesi
Wheel hub zvisimbiso 370150A inoshandiswa mumotokari uye inorema basa rori vhiri hub ine hupenyu hwakareba uye yakanaka yekuisa chisimbiso mashandiro.
YeMota Shock Inobata Miromo Mafuta Chisimbiso China Manufacturer
Zvemotokari uye mudhudhudhu kuvhunduka absorber muromo mafuta chisimbiso
semuenzaniso: 3732-1391 saizi: DC 36.5-12.5-3 / 10.4MM
Shock Absorber Lip Oiri Seal inoda Multi-muromo uye yakakwirira elastic kugadzikana dhizaini. Yakakwira kubatana simba pakati pesimbi nerabha. Inogona kumira kumanikidza uye kudzivirira ruzha, kuvuza kwemafuta uye guruva kubva kunze mukudzosera kufamba. Inogona kushandiswa mu auto shock absorbers. Elasticity bushings uye elastic mountings zvinoshandiswa mune zvese zvinotyisa zvinotora masisitimu.
Hyundai Yechimotokari Valve Seal China Manufacturer
Hyundai YeMotokari mota Valve hundi Chisimbiso chakuumba uye dhizaini seO chikamu chikamu .uwanzoshandisa viton rabha zvinhu uye kabhoni simbi mafupa ,, kusangana yakakwira temperaure uye oiri kuramba muinjini vharafu hunde.
Zvemotokari Kutakura Zvisimbiso Gasket China Manufacturer
Kutakura chisimbiso gasket, vhiri yuniti chisimbiso
Saizi: sechikamu nhamba kana kudhirowa
Chinyorwa: NBR nesimbi
Ruvara: nhema, yero, orenji, bhuruu